लेस्बियन महिलाले विमान उडाइरहेकी महिला पाइलटलाई राखेको प्रस्ताव स्वीकारपछि दुबैमा उत्साह
गृहपृष्ठ » जीवनशैली » लेस्बियन महिलाले विमान उडाइरहेकी महिला पाइलटलाई राखेको प्रस्ताव स्वीकारपछि दुबैमा उत्साह
मङ्गलबार ७ असार, २०७९
काठमाडौं । एक लेस्बियन फ्लाइट अटेन्डेन्टले ३५ हजार फिटको उचाइमा उडिरहेको हवाईजहाजमा आफ्नो प्रेम व्यक्त गरिन् ।
उनको प्रेम अरु कोहि नभएर विमानकी महिला पाइलट थिइन् । जानकारी अनुसार दुवैको भेट २ वर्षअघि भएको थियो ।
पहिलो भेटमा नै दुवै एकअर्काको मायामा परेका थिए । लेस्बियन महिला भेरोनिका रोजास अलास्का एयरलाइन्सको क्षेत्रीय साझेदार स्काईवेस्टमा उडान विमान परिचारिका छिन् । जबकि, एलेजान्ड्रा मोन्कायो एक पाइलट हुन् । अलास्का एयरलाइन्सले ‘फ्लाइ विथ प्राइड’ महिना मनाइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यो जोडी एयरलाइन्सका लागि उत्कृष्ट विकल्प बनेको हो । जब रोजासले हालै पाइलट मोनकायोलाई सैन फ्रान्सिस्कोबाट लस एन्जलसको ‘प्राइड डिलाइट’ उडानमा चढ्न आग्रह गरिन्, उनले यस्तो प्रस्तावको आशा गरेकी थिइनन् ।
एयरलाइन्सले साझा गरेको भिडियोमा रोजास र मोनकायो आफ्नो पहिलो भेटको सम्झना गर्दै टेलिफोनमा कुरा गरिरहेको देखिन्छ ।
मोनकायोले प्रेम प्रस्ताव स्वीकार छ भनेपछि, चालक दलका सहकर्मी र यात्रुहरूले ताली बजाएर समर्थन गर्छन् । मोनकायोले भनिन्, ‘यो राम्रो छ, म आज धेरै मायामा छु । अलास्का (अलास्का एयरलाइन्स) सधैं मेरो नम्बर एक भएको छ । म पक्कै भन्न सक्छु कि उनीहरु कति ख्याल राख्छन् ।’
यता, रोजासले भनेकी छिन्, ‘मैले सधैं अलास्का (अलास्का एयरलाइन्स) को प्रशंसा गरेको छु ।
तिनीहरू तेस्रोलिंगी समुदायमा कति गहिरोसँग डुबेका छन् । सबैको माया र समर्थनको लागि धन्यवाद, यो अद्भुत छ ।’ तपाईंलाई जानकारी गराउ कि प्राइड मन्थ लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेन्डर र क्वियर व्यक्तिहरूको एक महिना लामो उत्सव हो ।
विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले भनौँ ‘डन्ट कल दार्जिलिङ, इट्स नेपाली टी’
बेहुलीले बिहे–हनिमुनका लागि बिहेमै उठाइन् २३ लाख, थाहा पाउँने सबैले गर्दैछन् तारिफ
डेटिङ एपमा सबै पार्टनर खोज्छन् : तर उनी कही नपाएपछि फ्याट खोज्देछन् ! -सहयोग गर्ने कि ?
कुनै बेला टायर टाल्ने राहुलसँग करोडौँ धन : १.५ करोडको कारमा १६ लाखको नम्बर प्लेट
बेलायतमा रोजगारीको नयाँ अवसर : फलफूल टिप्ने काममा कयौँ नेपाली, लाखौँ कमाई
हामी किन ‘किस’ गर्छौं ? चुम्बन गर्ने चलन कहाँबाट आयो ?
अध्ययनको नतिजा : भारतमा १० प्रतिशत महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई पिट्छन्
नेप्लीज टिनेजर कन्फेशन : तिमी छौ नी, ‘लास्टै चालु रै छौ’ छ्या…
एसियाका धनी ५० अरब डलर साम्राज्यकी जेठी बुहारी श्लोका छिन् यति साधारण
उच्च घरमा विहेपछि पार्टी दिनहुँ : मलाई देवरले गरेको सबै भन्दापनि घरका गुपचुप राख भन्छन्
श्रीमान–श्रीमतीलाई सधैँ खुशी राख्ने यी चमत्कारीक तरिका, हरक्षण खुशी रहनेछ वैबाहिक जीवन